“Haddii Madaxtooyadu U Dabaal-Degayso Guusha Kulmiye, anaguna waxaanu naxash ku sidnaa Dimuqraadiyadii Somaliland” DrGaboose | Somalidiasporanews.Com
“Haddii Madaxtooyadu U Dabaal-Degayso Guusha Kulmiye, anaguna waxaanu naxash ku sidnaa Dimuqraadiyadii Somaliland” DrGaboose
December 11, 2012 | Filed under: Wararkii ugu Dambeeyay | Posted by: UK Hargaysa Dec11/12(SDN)Masuuliyiinta Ururka UMADDA oo maanta shir jaraa’id ku qabtay xafiiskooda magaalada Hargeysa ayaa waxa ay ku faaqideen xaalada uu dalku ku sagan yahay iyo doorashadii dalka ka dhacday.
Shirkan jaraa’id oo ay maanta si wada jir ah u qabteen guddoomiyaha ururka Dr. Maxamed Cabdi Gaboose iyo guddoomiye ku xigeenka labaad ee ururka Eng. C/rashiid Maxamed.
Warsaxaafadeedkan oo dhameystirana waxa uu dhignaa sidan : “Daah kama saarna dadweynaha saqiir iyo kabiir wixii dhacay maalintaas ay doorashadu dhacaysey, waxanse isku deyeynaa inaan in yaroo kooban kasoo ban dhigno khaladaadkii loo badheedhay maalintaas ay ka mid ahaayeen:
Waxaa sanaaduuqda ka yimid goobaha codbixinta ee ku soo xarootey xarunta komishanka laga helay sanaaduuq badan oo xambaarsan cod ka badan waraaqihii goobta la geeyey iyadoo aan laguna xusin inay jireen wax kordhin ahi.
Waxaa sanaaduuqda qaarkood lagu arkay inaanay is waafaqsanayn warqadda natiijada goobta (Summery Sheet) iyo codadka ku jira sanduuqa, ururo iyo musharixiin la danaynayona si gaar loogu badiyey.
Iyadoo sanaaduuqda ku soo xerootey goobaha dusha laga soo saaray baco waaweyn oo ay ka buuxaan waraaqo cod bixineed dushana lagaga soo qoray Ururo magacyadood halkii ay ahayd in sanduuq xidhan lagu keeno.
Iyadoo aan inta badan muraaqibiinta ururada la siin, komishankuna diidey inay bixiyaan warqadda natiijada goobta, si hadhow xilliga hubaal celinta laysugu hubiyo sanduuqa codadka ku jira iyo warqadda natiijada ururku wato.
Iyadoo sanaaduuq badan gacanta loo geliyey masuuliyiinta iyo musharixiinta xisbiga Kulmiye, lana tageen goobo u gaar ah iyadoo aan wax muraqibiin ah iyo komishan tooni la socon, kadibna ay beelo u qaybsadeen natiijadiina ay komishanku u ansixiyeen.
iyadoo marka ay masuuliyiinta ururada la danaynayaa codsadaan waraaqo dheeraada, kuna andacoodaan inay goobihii ka dhamaadeen, inuu komishanku isagoo aan la xiidhiidhin masuuliyiintii komishanka ee goobta uu si degdega ugu rarayey sanaduuq fara badan oo aan wax komishan ahi la socon. Halka goobaha loo filayo in ururada mucaradku ku badanyihiinna laga raajinayey, goobaha qaarkoodna marka horeba lageeyey tiro ka yar tii loo qoondeeyey.
Iyadoo musharixiinta iyo taageerayaasha ururka Kulmiye carqaladeeyeen kuna soo qaadeen weerar hubaysan degaamada ururka UMADDA, si ay u abuuraan xaalad nabadgelyo xumo Komishankuna sidaa ku xidheen goobihii codbixinta. Sida wadaamogoo, Ulasan, Kiridh, Qudbiga iyo Higlo Habariheshay.
Wuxuu Komishanka doorashooyinku keentay laba qof oo loo bixyey Hubiyeyaal, kuwaasoo joogey albaabada goobaha codbixinta ka baxsan caasimadaha, ahaana taageerayaasha Kulmiye laguna soo xushay aqoonta ay u leeyihiin dadka deeganka. Hubiyeyaashaasi marka Kuyuugu soo gaadho qof ay u gartaan mucaarad waxay si been ah ugu eedeynayeen inuu hore u codeeyey, isla markaana ku dirayeen askarta goobta joogtaa sidii muwaadinkaas looga saari lahaa kuyuuga iyagoo u isticmaalayey inay jidhdilaan, ama timaha qayb ka xiiraan.
Iyadoo dhaqdhaqaaqa gaadiidka maalinta cod bixinta aad loo soo koobay, hadana waxa muuqatey in gaadiid aad u farabadan loo fasaxay xisbiga Kulmiye, kuwaasoo hawlgalkoodii noqday sidii maalin olole o